UMegan Thee Stallion emkhankasweni wezingubo zangaphansi zikaCalvin Klein | Scrolla Izindaba
UMegan Thee Stallion emkhankasweni wezingubo zangaphansi zikaCalvin Klein
UMegan uthathe isitayela sakhe sokuba “intombazane eshisayo” ngenhliziyo njengoba egqama emkhankasweni wakamuva wesikhangiso sikaCalvin Klein.
Izithombe ezinhle zithathwe nguMario Sorrenti kanti sezishise izikhotha ezinkundleni zokuxhumana selokhu zakhishwa ngoLwesithathu.
Lo mculi oneminyaka engama-26 uthwetshulwe emodela egqoke ubhodisi omhlophe nephenti le-thong ezine-logo e-trim yomkhiqizo, kanye nebhulukwe ejean angafasiwe inkinobho.
Izithombe zikhombisa isitayela sokuhweba sikaCalvin Klein esincane ngokumnyama nokumhlophe. Ngaphambi kukaMegan, izinkanyezi ezinjenge-supermodel uGigi Hadid, uJustin Bieber noCalvin Harris bayinyathela le ndlela ehlonishwayo.
Ubuye wadlala eceleni kwesihlabani se-“Euphoria” uJacob Elordi, se-“Hamilton” alum u-Anthony Ramos nokuningi emkhankasweni omusha we-“Blank Canvas”.
Umthombo wesithombe: @StallionPics